नेपाल भर्सेस सिंगापुर, कुन टिम बलियो? (हेड टु हेड) - Everest Dainik - News from Nepal
नेपाल भर्सेस सिंगापुर, कुन टिम बलियो? (हेड टु हेड)
याे पनि पढ्नुस विश्वकप छनोट खेल्ने फुटबल टोलीको घोषणा
सिंगापुर र नेपालको विगत कस्तो?
नेपाल र सिंगापुरको विगत हेर्ने हो भने यी दुई टिमबीच अहिलेसम्म ३ वटा टि-२० खेल भएको छ । जसमा २ वटा नेपालले जितेको छ भने एउटा खेल वर्षाले नतिजाविहिन बनेको थियो । सिनियर स्तरमा हालसम्म टि-२० र एकदिवसीयमा सिंगापुरले नेपाललाई हराउन सकेको छैन ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकप छनोटः जोर्डनविरुद्ध नेपालको प्लेइङ–११